Nnwom 142 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔbɔɔ mpae sɛ wonnye no mfi wɔn a wɔtan n’ani nsam
“Minni baabiara a meguan akɔ” (4)
“Me wiase nyinaa ne wo” (5)
Maskil.* Mpae a Dawid bɔe bere a na ɔwɔ ɔbodan mu no.+ 142 Meteɛm frɛ Yehowa sɛ ɔmmoa me;+Misu frɛ Yehowa sɛ ɔnyɛ me adom. 2 Mekɔ n’anim kɔka me dadwen kyerɛ no;Mekɔ n’anim kɔka m’ahohia kyerɛ no+ 3 Bere a me honhom abotow* wɔ me mu no. Ɛba saa a, wokyerɛ m’anammɔn kwan.+ Ɔkwan a mefa so no,Wɔasum afiri wɔ so de ahintaw me. 4 Hwɛ me nifa so, na wubehuSɛ obiara nni hɔ a odwen me ho.*+ Minni baabiara a meguan akɔ;+Me* ho nhia obiara. 5 O Yehowa, misu frɛ wo sɛ boa me. Meka sɛ: “Wone me guankɔbea;+Me wiase nyinaa* ne wo.” 6 Tie me sufrɛ,Efisɛ mabotow koraa. Wɔn a wɔtan m’ani no, gye me fi wɔn nsam,+Na wɔn ho yɛ den sen me. 7 Gye me* fi afiaseNa minyi wo din ayɛ. Ma atreneefo ntwa me ho nhyia,Efisɛ wo ne me di no yiye.
^ Anaa “m’ahoɔden asa.”
^ Anaa “obu me ho akontaa.”
^ Nt., “Me kyɛfa ara.”
^ Anaa “Gye me kra.”